बाबु विदेशमा बेपत्ता, आमा अर्कैसँग : अब छोरीलाई कसले हेर्छ ? - Deshko News Deshko News बाबु विदेशमा बेपत्ता, आमा अर्कैसँग : अब छोरीलाई कसले हेर्छ ? - Deshko News
बाबु विदेशमा बेपत्ता, आमा अर्कैसँग : अब छोरीलाई कसले हेर्छ ?
रामेछाप, असार २२
‘कति सजिलो छ है अर्काकी छोरी ल्यायो, आफ्नो थर उसको नामको पछाडि जोडिदियो अनि उसलाई छोराछोरी जन्माउने साधन बनाउन ?’ रामेछापको रामपुर गा.वि.स ६ खानीडाँडाका मोतीबहादुर याक्चे मगरको यो आक्रोश अरु कसैलाई नभएर आफनै भाइ मिनबहादुरप्रति हो ।
भाइ मिनबहादुर रोजगारीका लागि मलेसिया गएको १० वर्ष भयो । ३ वर्षसम्म त घर परिवारसँग सम्पर्क पनि भइरहेको थियो । तर त्यसपछिका ७ वर्ष न सम्पर्क छ, न त कुनै खबर नै ।
विदेश जाने बेला मीनबहादुरकी श्रीमती गर्भवती थिइन । त्यसपछि जन्मिएकी छोरी अहिले ५ कक्षामा पढ्छिन् । तर बाबुको अत्तोपत्तो छैन ।
मिनबहादुरका दाजु मोतीबहादुरसँग सुनाउने कुरा धेरै छन् । ‘अब त छोरीले बाबा खोई भनेर सोध्न थालिसकी, उसलाई हामीले के जवाफ दिने’ छोरीले मात्रै होइन ६५ वर्ष पुगिसकेका बाबुआमाले पनि उहाँको बाटो हेरिरहनुभएको छ । तर एक दिन दुई दिन गर्दा बुबाआमाको ज्यान छोराकै पिरले सुक्न थालिसक्यो । छोरो आउला की भन्ने आश अझै मरेको छैन ।
बुबाआमा र छोरीको आशा बोकेर मोतीबहादुर भाइको खोजीमा भौंतारिरहनुभएको छ । तर उहाँलाई मात्रै होइन, परिवारका कसैलाई नै थाहा छैन मिनबहादुर कुन म्यानपावरबाट गएका हुन भन्ने । गएको तीन वर्षसम्म परिवारसँग सम्पर्कमै थिए । त्यसैले परिवारले पनि गएको म्यानपावरको नाम सोधेनन् ।
विदेश गएपछि मीनबहादुरले जाँदाको ऋण नब्बे हजार पनि तिरे । ‘तर त्यसपछि करार अवधि सकिएपछि दुतावासमै गएर पासपोर्ट बनाउँछु नागरिकता पठाइदिनु भन्यो मैले पठाइदिएँ ’ मोतीबहादुरले सुनाउनुभयो, ‘तर उसले त यसैलाई अन्तिम बोली बनाइदियो ।’
‘ओइरो माथिको पहिरो भनेको यही होला’ मोतीबहादुरका आँखा भरिए ‘अहिले त तीन महिना मात्रै भयो बुहारी पनि अर्कैसँग गइन ।’ सुरु सुरुमा त मीनबहादुरले पनि श्रीमतीलाई फोन गरिरहन्थे । तर पछि फोन गर्न छाडे ।
आजको मौसमको अवस्था कस्तो रहला ?
काठमाडौं, माघ ४जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको
कोरोना प्रभावित महिलालाई राहत
रौतहट, माघ ३ यूएन वुमनको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था माण्डवीले रौतहटको राजपुर नगरपालिका क्षेत्रका कोरोना प्रभावित
कञ्चनपुरमा एक युवती मृत फेला
कञ्चनपुर, माघ ३कञ्चनपुरमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । जिल्लाको वेदकोट नगरपालिका–७ की १८